ADB Connect Android via Wifi (Without USB Cable) - အောင်အောင်ဆွေ Blog
ADB Connect Android via Wifi (Without USB Cable)
Android ADB Commands,
Android Device ကို PC (Wireless Card Inserted) သို့ မဟုတ် Laptop နဲ့ Wireless ချိတ်ဆက်ဖို့ အတွက် ... လိုအပ်တာတွေကတော့
1 - Terminal Emulator.apk
2 - What is My IP.apk3- ADB.rar
ဒါတွေကို Download အရင်ဆွဲလိုက်ပါ .. .. Root မလုပ်ရသေးရင် မရပါဘူး .. Root လုပ်ဖို့VROOT ကိုအရင်ဆွဲပြီးလုပ်လိုက်ပါ .. ပြီးရင်တော့ Terminal Emulator နဲ့ What is My IP apk နှစ်ခုကို ဖုန်းမှာ Install လုပ်လိုက်ပါ .. ပြီးပြီဆိုရင် Terminal Emulator ကိုဖွင့်ပြီး အခုလိုရိုက်ပါ ..
၁ - su လို့ ရိုက်ပြီး Enter ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ ..Super User Request တောင်းရင် Allow လုပ်ပေးပါ . (နောက်တစ်ကြောင်း အစမှာ # ဒီလို ပုံပေါ်မှရပါမယ်)
၂ - setprop service.adb.tcp.port 5555 လို့ ရိုက်ပြီး Enter ကိုနှိပ်ပါ .. (5555 နေရာမှာ ပြောင်းလဲရိုက်လို့ ရပါတယ် နားမလည်ရင်တော့ ဒီအတိုင်းပဲရိုက်သွားလိုက်ပါ)
၃ - stop adbd လို့ ရိုက်ပြီး Enter ကိုနှိပ်ပါ ..
၄ - start adbd လို့ ရိုက်ပြီး Enter ကိုနှိပ်ပါ .. ဒါဆိုရင်တော့ Android မှာ Setting ချပြီးသွားပါ ပြီ .. ဖုန်းကို ခဏ ချပြီး PC ဆီကို ပြန်လာပါ မယ် ..
သင့် PC ဟာ Laptop လို Wireless ပြန်လွှင့်နိုင်တဲ့ Wifi Card ပါမှရပါမယ် .. Laptop ဆို အဆင်အပြေဆုံးပါပဲ .. PC မှာဆက်ပြီး Setting ချရအောင် ...
Window Key တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီး cmd လို့ ရိုက်ရှာလိုက်ပါ ... cmd.exe ဆိုတာပေါ်လာရင် Right-Click နှိပ်ပြီး Run as administrator ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ... cmd box ပေါ်လာရင် .. အောက်ကအတိုင်း စရိုက်ပါမယ် ..
၁ - netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=AndroidWifiPCSuite Key = @ung@ungswe123
(ဒီအကြောင်းမှာ ssid="ကြိုက်တာပေး" Key="ကြိုက်တာပေး" လို့ ရပါတယ် ဒါပေမယ့် WPA2 နဲ့ ပေးရတာဆိုတော့ Password Type မှန်မှ ချိတ်ဆက်လို့ ရပါမယ် .. နားမလည်ရင် ဒီအတိုင်းပဲဆက်ရိုက်ပါ)
၂ - netsh wlan start hostednetwork
(ဒီအတိုင်းရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပြီးရင်တော့ PC ကနေ ပေးထားတဲ့ ssid နာမည်နဲ့.. Wireless တစ်ခု လွှင့်လိုက်ပြီးပါပြီ .. အဲဒါကို ဖုန်းကနေ ပြန် connect လုပ်ရပါမယ် .. ) ဖုန်းကို ပြန်ကိုင်ပါမယ် ...
Wifi ကို On ထားလိုက်ပြီး Scan လုပ်လိုက်ပါ .. စောစောက PC ကချထားတဲ့ ssid ကို တွေ့ ရင်ပေးထားတဲ့ Key ကို Password မှာရိုက်ပြီးဝင်ပါ ...
ဒီ Post အတိုင်းဆိုရင်တော့ AndroidWifiPCSuite ဆိုတဲ့ Wifi တစ်ခုတွေ့ ရင် @ung@ungswe123 ဆိုတဲ့ Password ရိုက်ပြီးဝင်လိုက်ပါ ..
Connected ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ .... ADB ကနေ ဆက်သွယ်ပြီး ဖုန်းကို Manage လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်ပါ မယ် .. ဒီ Post ကိုဖတ်နေတဲ့ သူဟာ ADB ကို ကျွမ်းကျင်တဲ့သူလို့ ယူဆပြီး ADB နဲ့ ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာ သိပ်မပြောတော့ပါဘူးနော် ..
အခု ဖုန်းဟာ Wifi မိနေပြီဆိုတော့ ဖုန်းရဲ့ IP ကို သိဖို့ လိုပါတယ် .. What is My IP ကိုဖွင့်ပြီး ဖုန်းရဲ့ IP Address ကို ကြည့်လိုက်ပါ ... ( ဥပမာ 192.168.173.107 ဆိုပြီးပေါ်ပါမယ် 0.0.0.0 ဆိုရင် Wifi မချိတ်မိသေးပါ )
IP ကို သိပြီဆိုရင် ADB.rar ကို ဖြည်ပြီး ADB Folder ထဲဝင်လိုက်ပြီး .. လွတ်တဲ့နေရာကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Shift ကိုဖိပြီး Right-Click ထောက်လိုက်ရင် Open Command Window Here ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ .. cmd box ပေါ်လာရင်
- adb connect ip:5555 ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တာနဲ့connected to ip ဆိုပြီး ပေါ်လာရင်တော့ .. သင့်ဖုန်းဟာ ADB နဲ့ USB Cable မလိုပဲ Wifi နဲ့ ချိတ်မိသွားပါပြီ .. (ip နေရာမှာ စောစောကကြည့်ထားတဲ့ နံပါတ်တွေထည့်လိုက်ပါ adb connect 192.168.173.107:5555 ဒီလိုမျိုးပါ)
unable to connect ဆိုရင်တော့ ဖုန်းရော PC ရော Restart ချပြီး အစကနေတစ်ဆင့်ချင်းပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ ..
ADB နဲ့ မိနေပြီဆိုတော့ သင်ကြိုက်တာ ဖုန်းကိုစေခိုင်းနိုင်ပါပြီ .. USB Debugging On စရာလဲမလိုဘူး .. အဆင်ပြေတယ်ဟုတ် .. ADB Code တစ်ကြောင်းပြမယ်နော် .. မစမ်းပါနဲ့ မယုံရင် .. Factory Reset ချတာပါ ADB ကနေ ..
၁ - adb shell "su -c 'wipe data'"
၂ - adb reboot
ဒီလို အဆင့်တွေနဲ့ ခက်ခဲနေတယ်ထင်တဲ့ သူတွေအတွက် .. Wifi ကနေ USB Cable မလိုပဲ .. App တွေ Game တွေ install လုပ်နိုင်မဲ့ . Wifi PC Suite တစ်ခုကို ကျွန်တော် ရေးနေပါတယ် .. နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်တော့ကြာဦးမယ်ထင်ပါတယ် .. ဘာပဲပြောပြော USB ကြိုးမပါပဲ Computer နဲ့ ချိတ်သုံးတယ် ဆိုတော့ အထာတော့ကျတာပေ့ါ ... :D